SomaliTalk.com » Daabacaadda lacagaha cusub iyo saamaynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha Soomaaliya – Qaybtii 3aad
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Wednesday, February 24, 2010 // 4 Jawaabood
Qaybahii hore Halkan ka akhri
Labadii qormo ee hore waxaan wax ka iftiiminay xilliyada la daabaco lacag cusub iyo ujeeddooyinka loo daabaco. Waxaan sidoo kale ‘miisaan’ saarnay qaar ka mid ah xujooyinkii ay ku andacoodeen xubnaha ka tirsan xukuumadda dawladda ku meelgaarka ah (TFG) ee ku aaddanaa daabacaadda lacagta cusub. Waxaan iyana wax ka tilmaanay bur-burka dhaqaale, ee sicir-bararku ugu horreeyo,oo daabacaadda lacagtaasi horseedi karto. Maadaama dawladda ku meelgaarka ahi (TFG) qaadatay shareecada Islaamka, xubnona ay ka yihiin (ku jiraan labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka) rag aqoon durugsan u leh diinta Islaamka laguna tuhmayo khayr fara badan, qormadan koobani waxay mawduuca daabacaadda lacagaha cusub ka eegaysaa dhinac cusub; shareecada Islaamka iyo waxay ka qabto daabacaadda lacag aan qiimeheeda la difaaci karin oo horseedaysa sicir-barar iyo bur-bur dhaqaale.
Ugu horayn waxaan leenahay, Islaamku waa diin dhammaystiran – waa diin buuxinaysa dhammaan baahiyaha aadamaha. Baahiyahaasi ha noqdeen kuwo qofeed ama kuwo bulsho; kuwo nafeed ama kuwo maal; siyaasad iyo dhaqaale; qaanuun iyo dhaqan; guddo iyo dibed. Waa qaab nololeed dhammaystiran oo daboolaya caqiidada iyo mucaammalaadka; shuruucda iyo nidaamka; waa qaab dhaqan iyo ilbaxnimo; waxay leedahay nidaam maaliyadeed iyo mid ganacsi oo gooni u ah; nidaam siyaasadeed iyo mid dawladnimo oo u gaar ah. Maadaama nidaamka maaliyadeed ee Islaamku qayb ka yahay shareecada Islaamka, shareecada Islaamkuna tahay nidaam dhammaystiran oo buuxinaya wax kasta oo nolosha ka mid ah, sida kaliya ee nidaamkaasi si fiican ugu shaqayn karo waa in la hirgeliyo shareecada Islaamka oo dhammaystiran.
Dhaqangelinta shareecada Islaamkuna waxay dan ugu jirtaa xukuumadda; waxay dan ugu jirtaa shacabka; waxay dan ugu jirtaa ganacsatada; waxay dan ugu jirtaa degaanka. Shareecadu waa caddaalad. Caddaaladduna waxay ka mid tahay waxyaabaha darteed Eede (SW) anbiyada u soo diray. Qur’aanku, caddaalada wuxuu kala mid dhigaa taqwada (alle ka cabsiga). Taqwaduna waa meesha ay ka soo dhambalmaan waxa wanaagsan oo dhammi. Rasuulku (SCW) si aad ah ayuu uga digay caddaalad darrida, wuxuuna kala mid dhigay mugdi. Caddaalad darridu waxay dhaawacdaa walaaltinnimada; waxay horseedaa colaad, shaki iyo naceyb; sidaas aawadeed, waxa kaliya ee laga dhaxlaa waa fadeexad iyo foolxumo adduun iyo aakhiro labadaba.
Dhammaan culimadii soo martay dunida Islaamku waxay ka sinaayeen in caddaaladu ka mid tahay tiirarka ugu horeeya ee shareecada Islaamka. Tusaale ahaan, Abu Yusuf dhanbaalkii uu u diray Haaruun al-Rashiid, khaliifadii Islaamka, isagoo sharaxaya ahmiyadda caddaalada wuxuu yiri ‘caddaalad darrida oo la tir-tiro waxay sare u qaadaa dakhliga dawlada, dedejisaa horumarka, barakaysaana wax kasta’. Al-Mawardi wuxuu ku tegey in caddaaladdu shacabka dhex dhigto kalgacal, ka dhigto kuwo u hoggaansan sharciga, dedejiso horumarka, barakayso dhaqaalaha, sarena u qaadaa nabadgeliyada iyo amniga. Sidoo kale, waxaa laga hayaa in uu yiri, ‘ma jiro wax uga fasahaad badan aduunka iyo dadkaba caddaalad darida’.
Ibn Taymiyah, agtiisa caddaaladu waxay lahayd micne ballaaran. Wuxuu oran jiray ‘wax kasta oo fiican caddaalad ayaa qayb ka ah, wax kasta oo xunna caddaalad darro’. Sidaas aawadeed, wuxuu ku tegey in caddaalad darradu mar kasta iyo nooc kasta oo ay tahayba xaaraan tahay. Xikmadaha uu inooka tegeyna waxaa ka mid ahaa in ‘Eebe (SW) ilaaliyo dawlad caddaalad ah, xataa haddaysan muslim ahayn, laakiin Eebe (SW) uusan ilaalin dawlad aan caddaalad ahayn, xataa haday tahay Islaam’. Wuxuu oran jiray ‘adduunku waa qaadi karaa caddaalad iyo gaalnimo, laakiin ma qaadi karo caddaalad daro iyo Islaam’.
Ibn Khalduun wuxuu isna ku tegey in aysan sina macquul u ahayn in waddan wax horumar ah ku tallaabsado caddaalad la’aan’. Wuxuu oran jiray, caddaalad daridu waa derbiga ugu weyn ee horistaaga horumarka. Sidoo kale, waa waxa soo dedejiya bur-burka waddammada’.
Caddaaladdu waa furaha nolosha, waa tiir dhexeedka amniga, waa dhabbaha horumarka. Sidaas aawadeed, waxaad arkaysaa in himilooyinka dhaqaalaha islaamka ay ugu horayso caddaaladdu. Nidaamka caddaaladda ku salaysani waa mid daboola baahida mujtamaca; ka fududeeya faqriga; sare u qaada tayada nolosha; horseedana horumar isu dheelitiran. Si loo dhiso nidaam ku salaysan caddaalad, waa in la soo bandhigo, lana hirgeliyo siyaasad dhaqaale oo horseedda degganaansho dhaqaale. Degganansho dhaqaalena ma yimaado ilaa la abuuro siyaasad dhaqaale iyo maaliyadeed. Siyaasad dhaqaale iyo maaliyadeedna ma imaan karaan ilaa la helo dadkii saxda ahaa ee dejin lahaa, hirgelinteedana hormuud ka noqon lahaa.
Haddaba, haddaan wax yar dib ugu noqono xiriirka ka dhexeeya daabacaadda lacagaha cusub iyo sicir-bararka, iyo saamaynta sicir-bararku ku leeyahay mujtamaca, waxaan leennahay, sicir-bararku laba jeerba waa yimaadaa: haddii la badiyo baaxadda lacagta (quantity of money) iyo haddii ay yaraato badeecadda suuqa taalla (supply of goods).
Daabacaadda lacagta cusubi dhowr jeerba way badinaysaa lacagta suuqa dhex yaacaysa: (1) haddii la daabaco lacag qiimeheedu yahay So.Sh. 20,000, 50,000, 100,000, iwm, sidaan hore u sheegnay, waxaa hoos u dhacaya kharashka daabacaadda, dabadeedna waxaa middiyoohoodii mar labaad xarshinta kala soo baxaya ganacsatadii, dagaal oogayaashii iyo bahalladii dadka dhiiga ka miiran jiray; (2) maadaama aan la hayn tirakoob cad oo la xiriira caddada lacagta suuqa taalla oo la beddelayo, waddanka oo dhammi uusan gacanta ugu jirin dawladda ku meelgaarka ah, uusanna jirin nidaam qeexan iyo hawl-wadeeno midkoodna, waxay noqonaysaa in wixii lacag u egba la beddelo. Haddii ay noqoto in waxkasta la beddelona, qof kasta mashiinka uu warqadaha ku daabacdo (printer) ayuu inta khad ka buuxsado warqado daabac bilaabayaa (ileen ma jirto tayo lacag la isla yaqaan oo leh calaamado iyo lambaro midkoodna).
Lacagtaas aan qiimaha ku fadhiyin oo sida carro-maanyadii iska soo daba dhacaysa waxay keenaysaa in badeecadihii suuqa yaallay, oo awalba ciriiri ahaa, ay mar labaad cirka isku shareeraan. Haddii sicir-barar ba’an (hyperinflation) yimaado, mushahaarka dadka masaakiinta ah la siiyo, sida shaqaalaha dawladda, aan wax laga beddelin, kan beerta yar leh aan loo helin qalab ama loo ballaarin dhulkiisa, kan baadiyaha jooga aan loo helin wax noloshooda kaba, kan miskiinka ah ee magalada jooga aan loo samayn meelo ay ka helaan cuntooyin jaban, bal joogey! dadku maxay ku noolaan? Sidaan sare ku soo sharaxnay, miyaysan arrintaasi noqonayn albaabkii caddaalad darrida oo la ballaqay! Miyaysanna sii hurinayn masiibooyinkii hore dhulkeenna u hareeyey. Yaa qaadaya mas’uulliyadaas Eebe hortiis!
Dhinaca kale, sida fuqahada Islaamku soo guuriyaan (tusaale ahaan, Chapra 1992), sida qofka Islamka ah looga rabo in uu raadiyo kasab xalaal ah, kuna bixiyo waddo xalaal ah, ayaa dawladda Islaamka ahna waxaa looga rabaa in ay dakhligeeda ka kasbato waddooyin xalaal ah, kuna bixiso waddooyin xalaal ah. Daabacaadda lacag aan qiimeheeda la ilaalin karin, horseedaysa sicir-barar, albaabada u furaysa caddaalad darro iyo bur-bur ku yimaada mujtamacu waa mid ka hor imaanaysa ahdaafta nidaamka maaliyadeed ee Islaamka.
Idanka Eebe, qormada danbe waxaan wax ka iftiimin doonnaa cawaaqib-xumada siyaasadeed iyo mujtamac ee daabacaadda lacagta cusubi dhabarka ku wadato iyo waddooyinka u furan maammullada ka baxsan dawladda ku meelgaarka ah.
Buuh Consulting Ltd
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: Lacag, Shire
4 Jawaabood " Daabacaadda lacagaha cusub iyo saamaynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha Soomaaliya – Qaybtii 3aad "
ducaalle yare salaad (ilyare) says:
Monday, March 22, 2010 at 12:06 am
marka hore salaan dhamaan umadda soomaliyeed iyo bahda somalitalk.com hadii aan kahadlo aniga fakarkayga lacagtaasi waxey illa tahay mid lagu abuurayo sicir barar fara badan iyo qaxooti waayo soomilladu waa danyar hadeer ayey ku jiraan xaalad xune markii lacagtaas lasameeyo haday hirgaso soomali maxay noqon?
ILYARE MAHAD SALAD CALI (ILYARE) says:
Sunday, March 21, 2010 at 11:40 pm
anigoo aha ilyare mahad salaad cali ilyare waxaan halkaan salaan marka hore somali talk.com iyo marka xiga umadda soomaliyeed waxan halkaan fakarkayga kusoo jeedin lahaa in lacagtaasi ay tahay sun suntaas oo larabo in lagu waxyeelayo umadda soomaliyeed marka waxaan ugu baaqayaa gudoomiyaha cusub ee bankiga soomaliyeed inuu is casilo sidii gudoomiyihii sharafta kaga tagay mudane bashiir isse ali ilyare
Friday, March 19, 2010 at 7:25 am
ASCW,Qoraaga wuu mahadsanyahay siduu wax u iftiiminayo balse ujeedada lacagtan loo dabacay aniga fahamkeyga waa in waraaqo Copy ah oo micna badan sameyneyn lagu cuno lacag USD 19million marka waa Way lacag loo lunsado keliya waayo Sheriifyada iyo ING Yariisow wey ucadahay In Bakaraha alshabaab Joogan,Puntland mamnuucday,Somaliland lacag kale leedahay,koonfurta oo dhana ay ka taliyaan Alshabaab iyo Xisbul islaam,marka lacagta la dabacayo Tolow ma Dirhamkii Emaratka mise Riyalkii Sucuudiga,Qof waalan xataa ma hamiyo inuu lacag Soo dabco haduusan dankale lahayn,Wadankase Barlaman ayaa jiree ma ansaxiyey,mise Sheriifyadaa waxkasta ah???.
Osman Farax Warsame says:
Thursday, March 4, 2010 at 12:08 am
sln bahda somalitalk iyo dhamman umadda somaliyed meelkasta
samaynta lacagta cusub ee dowladda somalia iyo madaxda cusub ee dalka manta lo dhibay waxa kaliya oo ay so kordhiyeen waa inay lacagta aan waxay tahay la aqoon ay dalka manta dhahaan waan u soo samayn iyaga oon soo buuxin shuruudaha loo bahanyahay marka lacag la samaynayo oo kala ah
1.in dowladdu dhamman dalka mamusho,kan kaliya ayaaba hor taagan dowladda
tani wa mid lagu dhacayo dhaqalaha umadda somaliyed waa qorshe ay degeen labada shariif ee kala ah shariif sakiin iyo shariif axmed oo labaduba farahooda kala aqoon doqoniimana u dheertahay sababtoo ah markii wadanka lo dhibay bay baddi dalka gateen oo nin horay ugu hamiyey uuna jirin waa yaabka yaabkiise yaa u dirsaday howshaas iyaga oo ay u taal mid baaxad weyn
puntland iyo ururada argagixisada ah ee shabab iyo xisbul islamba waa dideen xagge ka shaqayn ma villa somalia
anagu dhac hor leh ma rabno